Proposed heritage square for George Town
[VIDEO] Polis Berat Sebelah Gari Rafizi Tapi Suami Shahrizat Dikecuali
Selangor Biaya Kos Guaman Rafizi, Presiden PKR Kecam Penahanannya
BAFIA breach: Rafizi detained, Najib protects crony
Petikan dari artikel Konspirasi Satria Neo WWW1 kemalangan? - Blog Malaysia In Crisis
- Warga internet kecoh lagi dengan kisah Kesultanan Johor, kali ini apabila sebuah kereta Satria Neo yang didakwa bernombor WWW1 terlibat dalam kemalangan. Ada yang mendakwa itu hanyalah taktik untuk menukar nombor WWW1 ke kereta mewah milik Sultan Johor yang lain.
- Walaupun TMJ telah menafikan kereta Satria Neo yang terlibat dengan kemalangan tempohari adalah bernombor WWW1, tetapi ramai warga internet yang masih yakin itu lah kereta yang terlibat dengan kemalangan. Hinggakan timbul cerita konspirasi nombor plat WWW1 dialihkan ke sebuah lagi Satria Neo milik Sultan Johor. Dikatakan Sultan dan kerabatnya mempunyai beberapa buah kereta Satria Neo.
- Jika betul WWW1 yang terlibat dengan kemalangan, mengaku saja lah. Mengapa perlu dinafikan dan sorok fakta sebenar? Takut rakyat akan mengata Sultan Johor kena tulah Datuk Seri Nizar ke? Bukan apa, jika tiada angin masakan pokok bergoyang. Tak kan lah orang pertama yang melaporkan kemalangan tersebut seorang yang buta huruf, tidak tahu membaca antara WWW1 dan JUS1!
Posted: 01 Aug 2012 08:20 AM PDT
Ukuleles are commonly associated with music from Hawaii where the name roughly translates as "jumping flea", perhaps due to the resemblance of the player's finger movements toa"jumping flea". Legend attributes it to the nickname of Englishman Edward William Purvis, one of King Kalākaua's officers, due to his small size, fidgety manner, and playing expertise. According to Queen Liliʻuokalani, the last Hawaiian monarch, the name means "the gift that came here", from the Hawaiian words uku (gift or reward) and lele (to come).
Posted: 01 Aug 2012 07:18 AM PDT
As the Muslim world is stunned by the horrific news of Muslims being slaughtered in Myanmar, the country's leading politician andasupposed human rights defender, Aung San Suu Kyi, has chosen not to see evil.
Hundreds of Rohingyas Muslims,aminority in the Asian country, have reportedly been killed at the hands of the majority Buddhists in the Rakhine province. The massacres have been going on for weeks. The United Nations just woke up and decided to send an envoy "to investigate". But the disturbing reports — images of burnt bodies and wailing mothers — have been steaming in for weeks. Reports by Amnesty International and Human Rights Watch were released, calling for the world to condemn the massacres.
All that does not seem to bother the Noble Laureate and so-called "democracy advocate". Suu Kyi just sits silent even as children, women and helpless elderly are being massacred by monks and mob. Her "humanitarian values" do not obviously embrace the poor of Rohingyas Muslims. We are shocked by the flagrant hypocrisy of this woman. The entire Muslim world stood by and supported her when she was reeling under the injustice of the ruling junta. We don't regret that. But we condemn her hypocrisy and the hypocrisy of the western world which has yet to react to the plight ofadefenceless minority.
Posted: 01 Aug 2012 06:47 AM PDT
Posted: 01 Aug 2012 06:43 AM PDT
ဒီလိုပါပဲ ဘင်္ဂလီပဲခေါ်ခေါ်၊ ရိုဟင်ဂျာပဲခေါ်ခေါ် ရခိုင်ပြည်မှာ ကာလကြာရှည်စွာနေလာခဲ့တဲ့လူတွေလည်း ခံစားဆုံးရှုံးကြရပြီ။ အရင်ကတည်းက အဆင်မ ပြေတဲ့ အိမ်နီးချင်းတွေ ခုတော့ ရန်သူတွေဖြစ်ကုန်ပြီ။ အခုပြသနာတွေပြီးရင် ရခိုင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေ ဘေးချည်းယှဉ်ပြန်နေကြရအုံးမယ်။ ကဲ ဒီ လူမျိုးနှစ် မျိုးရဲ့ဆက်ဆံရေး အဆင်ပြေပါ့မလား။ သူ့ ငါသတ် ငါ့သူသတ်ဖြစ်ပြီးမှ အမုန်းတရား ဘေးထားပြီး ဖွံ့ ဖြိုးရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လက်တွဲကြ ပါလို့ ဆိုလာ ရင် လက်တွေ့ ကျပါအုံးမလား။
အဓိက ထောက်ပြချင်တာ ထောက်ပြရရင်
အခုကိစ္စကို မဖြစ်ဖြစ်အောင် ဆွပေးတာ ဘယ်သူတွေလဲ။
မြန်မာပြည်က မြို့ ကြီးမှာနေတဲ့လူတွေ၊ နိုင်ငံခြားမှာ မိုးလင်းမိုးချုပ် မကြောင့်မကျ မတောင့်မတျနရတဲ့လူတွေ၊ သတင်းထောက် သတင်းစာ ဂျာနယ် ဆိုပြီး ငွေရှာနေတဲ့လူတွေ။ မျိုးချစ်စိတ်တွေ၊ တိုင်းပြည်အတွက်တွေ၊ အချုပ်အခြာအာဏာတွေ တွင်တွင်ပြောနေကြတယ်။ မြန်မာပြည်ကြီးကို ကုလား လက်အောက်မရောက်အောင် ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ မျိုးချစ်အာဂတွေ။ တကယ်တမ်း သတ်လားဘာလားဖြစ်တော့ ဘယ်သူခံရလဲ။ ရခိုင်ပြည်သူတွေ ပါပဲ။ နေ့ သတ်ခံရမလား ညသတ်ခံရမလားမသိတဲ့ ဘ၀၊ အစားအသောက်ပျက်ပြီး ဘယ်ခါငတ်မလဲ မသိတဲ့ဘ၀၊ ပျက်ဆီးသွားတဲ့ အိုးအိမ်တွေအတွက် ဘယ်ခါမှ အစားပြန်ရမလဲမသိတဲ့ဘ၀။ မိသားစုထဲက သေသွားပြီဆိုရင်တော့ ထာဝရ ဆုံးရှုံးမှုပါပဲ။ သွေးရဲသံရဲ၊ သေသံ ကြောက်သံ ငြီးတွားသံတွေကို ခြောက်ခြားဖွယ် ရင်ဆိုင်နေရတာတွေက ရခိုင်ကပြည်သူတွေပါပဲ။
ကဲ တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်ပါဆိုပြီး ပြသနာဖြစ်အောင် တတွင်တွင်အော်နေတဲ့ ပြည်မနဲ့နိုင်ငံခြားကလူတွေက အချိန်တန်ရင် ရေခဲရေသောက်၊ ထမင်း ၀အောင်စားပြီး၊ အိပ်မောကျနေလောက်ပြီ။ နိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့လူတွေအတွက် အနစ်နာဆုံးကတော့ အိပ်ရေးပျက်ရုံလောက်ပေါ့။ အမှန်တကယ် ပေး ဆပ်လိုက်ရတာကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်က ပြည်သူတွေပါပဲ။
ဆွပေးတဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေကို ကြည့်ပါ။ ပြည်မကလူတွေပါပဲ။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့နေ့တဓူဝ ကိစ္စတွေနဲ့ ကောင်း ကျိုးဆိုးကျိုးကို ထိရောက် ခံစားမှုမ လိုတဲ့ မြို့ နေအလယ်အလတ် လူတန်းစား ဗမာ (သို့ ) မြန်မာတွေပါပဲ။ ရခိုင်ပြည်သွေးစွန်းတဲ့ သတင်းတွေအတွက် ဂျာနယ်စောင်ရေတိုးသလို ပေါ်ပျူလာ တွေလည်းဖြစ်ကုန်လေရဲ့ ။
သူတို့ ကြားချင်တာ ဖြစ်ချင်တာကို ရခိုင်ပြည်သူတွေက သွေးနဲ့ ရင်းပြီး ပေးနေကြရပြီ။ သူတို့ ပြောတဲ့ တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်ကြပါဆိုတာကို ရခိုင်ပြည် သူတွေရဲ့အသက်နဲ့ သိက္ခာနဲ့ ကာကွယ်ပေးနေရပြီ။
အမျိုးဘာသာ သာသနာကို ကာကွယ်ပါဆိုပြီး တိုင်းပြည်ကို နှစ်ပေါင်း ၆၀ ဒုက္ခပေးလာတဲ့အစိုးရ လှုပ်ဆော်မှုတွေ ကိုတော့ ပြောစရာတောင်မလိုပါ။
မြန်မာပြည်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာ၊ အမျိုးဘာသာသာသနာကို ကာကွယ်ဖို့ရခိုင်ပြည်မှာ လူသတ်ပွဲ၊ သွေးရေချိုး ပွဲနဲ့ မှဖြစ်မှာလား။ တရုတ်အစိုးရကို မြစ်ဆုံထိုးပေးလိုက်တာ၊ ထားဝယ်ဆိပ်ကမ်းအတွက် နှစ်ပေါင်း ၃၀-၄၀ နိုင်ငံ ခြားကိုအပြီးပေးလိုက်တာ၊ ရွှေဂတ်စ်ပရောဂျက်အတွက် နိုင်ငံခြား ကုမ္ဗဏီတွေကို နယ်မြေတွေ လွဲပေးလိုက်တာ၊ ဒါတွေက နယ်မြေနဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိပါးတာပဲမဟုတ်ဘူးလား။
ဘုန်းကြီးတွေကို ၂၀၀၇ တုန်းက အကြမ်းဖက်တုန်းကကျတော့ ဘာသာသာသနာကို စော်ကားဖျက်ဆီးတာပဲ မဟုတ်ဘူးလား။ နယ်စပ်တွေမှာ တင်မက မြို့ ကြီးတွေမှာပါ နိုက်ကလက်တွေဖွင့်ပြီး မိန်းကလေးတွေကစ သောက်စားမူးယစ် ပျက်ဆီးနေတာတွေကြတော့ အမျိုးသားရေးကို ထိပါးတာမဟုတ် ဘူးလား။
ဒါတင်မကဘူး မြန်မာအ၀ှမ်းမှာဖြစ်နေတဲ့ အလုပ်သမားဆန္ဒပြမှု၊ တောင်သူလယ်သမားတွေဆန္ဒပြမှု၊ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးဆန္ဒပြမှုတွေ အားလုံးအခု ငြိမ် သွားပြီ။ ဒါပေမဲ့ ရခိုင်ပြည်သူတွေ အသက်လုပြေးနေကြရပြီ။
ရခိုင်ပြည်နယ်က ချင်းပြည်နယ်ပြီးရင် အဆင်းရဲဆုံးပြည်နယ်လို့ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးမရှိရင် ဖွံ့ ဖြိုးရေး လည်းမရှိဘူးလို့ ပြောကြတယ်။ မမြင်မ ရှင်းတဲ့ အိမ်နီးချင်းတွေ ဒီလောက်ဖြစ်ပြီးမှ ငြိမ်းချမ်းကြပါအုံးမလား။ ဒါ ကြောင့် အချက် ၂ ချက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
- အဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင် အမျိုးသားရေးလှုံ့ ဆော်နေတဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပ ပြည်သူများ ရခိုင်ပြည်သူများ မျက်နှာထောက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လူမျိုးပေါင်းစုံ ဘာသာပေါင်းစုံ လက်တွဲကြဖို့ ကြိုးစားကြပါ။
- အဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင် မောင်းခတ်ပေးနေတဲ့ လူတွေ၊ သတင်းဌာနတွေ၊ အစိုးရဌာန (သို့ )အရာရှိတွေ ကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်ကြပါ။
- ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး၊ အမျိုးသားရေး စိတ်ဓာတ်ပျင်းထန်နေတဲ့ အသိများ မိတ်ဆွေများကို နှီးစပ်ရာ ထိန်းပေးကြပါ။
ရခိုင်ပြည် အမြန် အေးချမ်းပါစေ။
Posted: 01 Aug 2012 10:31 AM PDT
Sebuah laman Facebook bernama "Kami Bersama Rafizi" dilancarkan oleh para penyokong Pengarah Strategi PKR Rafizi Ramli petang tadi. Setakat ini sudah lebih 700 orang LIKE laman FB tersebut.
Beliau dijamin oleh Pengarah Komunikasi, Nik Nazmi Nik Ahmad. Kes ditetapkan pada 10 September nanti.
Posted: 01 Aug 2012 04:13 AM PDT
I just heard that are plans, real plans, to develop the Sia Boey area in George Town asaheritage square. Don't let it be hot air; make it come to fruition fast. Here is the speech by Penang Chief Minister Lim Guan Eng atapress conference yesterday:
The Penang State Government and Penang Development Corporation (PDC) are planning to develop Komtar Phase 5, comprising 4.5 acres, into Penang's new heritage enclave, named Heritage Square. This is in line with George Town's World Heritage Listing as well as to complement PDC's revitalisation efforts for Komtar as the socio-civic centre and business hub of the State. This prime 4.5 acres of land in the heart of George Town will predominantly be public space, as part of giving back to city dwellers.
i. restoration and expansion of "Sia Boey" (Prangin Market);
i) To restore and refurbish the existing "Sia Boey" (Prangin Market) structure. This will revitalise the "Sia Boey" intoaretail and tourist site, comprising among othersavisitors' centre, crafts and souvenir retail areas, flowers and food hubs. To expand the "Sia Boey", market, PDC will build an additional adjacent market to complement the existing one for the same intended use. The restoration and revitalisation of the "Sia Boey" is significant to George Town, as it marked the core zone boundary of the George Town UNESCO Heritage Site;
The project will also enhance George Town's position as Malaysia's most livable city and eighth most livable city in Asia, as well as to reinforce Penang's position asaUNESCO World Heritage Site andatourism hub of the East.
Posted: 01 Aug 2012 05:11 AM PDT
Easy peasy...how the axed Merdeka logo was designed. Don't learn from this tutorial. Just watch and avoid this kind of bad design at all costs. ;)
အစိုးရ၏ ရခိုင်ပြည်နယ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ၀င်းမြိုင် ဆိုသူက "စွပ်စွဲချက်များမှာ အခြေအမြစ်မရှိဘဲ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်ရေးအဖွဲ့၏ တောင်းဆိုချက်များမှာလည်း ပကတိအခြေအနေနှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်နေကြောင်း၊ အဆိုပါ ဒေသမှာ အေးချမ်းနေပြီဖြစ်ကြောင်း" ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့က ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။
"တစ်လခွဲကြာတိုက်ခိုက်မှုကြီးမှာ အဓိက ပစ်မှတ်ကတော့ မွတ်စလင်တွေကိုပါ၊ အထူးသဖြင့် ရိုဟင်ဂျာတွေကို တဖက် သတ် တိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းလိုက်တာပါပဲ၊ ဒီကိစ္စမှာလုံထိန်းတွေရဲ့လက်ချက်လည်းပါသလို ရခိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာ မျက်ကန်း မျိုးချစ်တွေက လုံထိန်းတွေကို အကာအကွယ်ယူပြီး ဆွမ်းကြီးလောင်း ၀ိုင်းသတ်ကြတာပါ"ဟု ဘန်ကောက်အခြေစိုက် နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်ရေးအဖွဲ့မှ Benjamin Zawacki က AP သတင်းဌာနကို ပြောဆိုသည်။
"နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်ရေးဥပဒေများနှင့် စံချိန်စံညွှန်းများအရ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ နိုင်ငံမဲ့အဖြစ်နဲ့ ရပ်တည်နိုင်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်ရေးမှတ်တမ်းတွေမှာ သက်တမ်းအရင့်ဆုံး အမည်းစက်ကတော့ ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် နိုင်ငံသားအဖြစ် ငြင်းပယ်မှုနဲ့ ခွဲခြားဖိနှိပ်ဆက်ဆံမှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ် "ဟု လူ့အခွင့်ရေးအဖွဲ့မှ Zawacki က ဆိုသည်။
ရိုဟင်ဂျာအရေး ကာကွယ်ပေးရန် အီရန်နိုင်ငံကလည်း ကုလသမဂ္ဂသို့ တောင်းဆိုခဲ့သည်။ "အကြောင်းရှာ ယိုးမယ်ဖွဲ့ပြီး မွတ်စလင်တွေကို လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးသုတ်သင်ရှင်းလင်းမှုလုပ်နေတာဟာ လုံးဝတရားမျှတမှုမရှိပါဘူး။ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေအရလည်း လက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူး"ဟု ကုလဆိုင်ရာ အီရန်သံအမတ်ကြီးက ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းထံ ရေးသားသောစာတွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။
Posted: 01 Aug 2012 04:01 AM PDT
Rohingya people living in Thailand hold posters and signs as they protest in front of Myanmar's embassy in Bangkok, during Myanmar's President Thein Sein visit to Thailand in this July 23, 2012 photo. — Reuters pic
Source: Rohingya Muslims "persecuted" after Myanmar crackdown says report
The former Burma hasadiverse ethnic and religious make-up, but the government does not include the Rohingya Muslims. There are at least 800,000 Rohingyas in the country but they are not recognised as one of its ethnic groups.
The Foreign Ministry has said 77 people died and 109 were injured during the violence, and nearly 5,000 homes burnt down. — Reuters
Posted: 01 Aug 2012 05:24 AM PDT
Gambar: Gelagat pasangan remaja ini dirakam sekitar jam 3.16 pagi.
"Sekarang ini anak lebih banyak habiskan masa di luar bersama rakan sebaya dan tidak bersama keluarga. Ramadan ini ibu bapa seharusnya menjalinkan hubungan baik dengan anak dan Tarawih bersama-sama.
"Malangnya semua ini tidak berlaku kerana ibu bapa terlalu sibuk dengan aktiviti sendiri hingga lupa tanggungjawab terhadap anak," katanya.
"Misalnya penggunaan motosikal merupakan keperluan, tetapi ibu bapa hari ini membeli motosikal kepada anak mereka tanpa menyedari anak mereka itu tidak mempunyai lesen. Ini bukan sahaja membahayakan orang lain malah ia turut membahayakan diri anak mereka.
"Pantaulah ke mana anak kita berada dan dengan siapa mereka berkawan. Bagi remaja perempuan kita harus ingat perlakuan rogol sering berlaku dimana ia melibatkan suka sama suka," katanya.
Menurutnya lagi, ibu bapa harus menerapkan ilmu agama yang sempurna kepada anak-anak mereka. -SH
Posted: 01 Aug 2012 03:54 AM PDT
Source: http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2012/8/1/nation/11771954&sec=nation(By VIJENTHI NAIR, 1/8/2012)
Chor announced the stop-work order when he, together with National Landscape Department representatives, met concerned members of the public and NGOs here. "Although 80% of the fencing work is complete and much damage has been done, we will work from now on to preserve (the forest) as well as repair the damage. More public engagement sessions would be held on the development of Bukit Kiara to make itabig-scale public park over the next 25 years."
Former prime minister Tun Abdullah Ahmad Badawi and his wife Tun Jeanne Abdullah, who is Landscape Malaysiachairman, were also present.
Kota Bharu – Seorang peniaga yang mata kanannya buta akibat terkena kelongsong gas pemedih mata semasa rusuhan perlawanan bola sepak di luar Stadium Sultan Muhammad IV di sini pada 2009, hari ini mendapat ganti rugi RM150,000.
Gambar: Ibnati Solihatul Nuri melihat kesan kecederaan pada mata suaminya, Mohd Huzaifah yang kini terpaksa pakai mata palsu.
Beliau berkata, selain keterangan daripada saksi pihak plaintif, rakaman video oleh seorang saksi bebas yang juga penonton perlawanan bola sepak itu, menunjukkan berlakunya tembakan peluru gas pemedih mata ke arah gerai plaintif.
Berdasarkan rakaman itu, plaintif rebah sejurus tembakan itu dilepaskan dan beliau kemudian dipapah oleh orang ramai.
Bagaimanapun, Hakim Ahmad Zaidi berkata pihak defendan yang hadir di tempat kejadian bukan bertujuan untuk mencederakan plaintif tetapi untuk menyuraikan rusuhan yang berlaku selepas perlawanan bola sepak antara Kelantan dan Negeri Sembilan itu.
Mahkamah juga memerintahkan defendan membayar kos RM20,000.
Pada6Ogos 2009, Muhammad Huzaifah menamakan pegawai Unit Simpanan Persekutuan (FRU) ASP M.Sathasivam, Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan Kerajaan Malaysia sebagai defendan.
Plaintif menuntut rugi am, ganti rugi teruk dan teladan berjumlah RM10 juta selain faedah, kos dan relif lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah.
Plaintif diwakili peguam Marwaliz Mahmud manakala kesemua defendan oleh Peguam Persekutuan Rohaiza Zainal.
Ketika ditemui di luar mahkamah, Muhammad Huzaifah dari Kampung Pasir Tok Kambing di sini, yang ditemani isterinya Ibnati Solihatul Nuri Mat Taib, 22, berkata beliau bersyukur dengan keputusan itu setelah menunggu sekian lama. – Bernama
Posted: 01 Aug 2012 02:12 AM PDT
Something we msy want to keep in mind when the world seems against us. Thanks to Angela who sent me this post.
Posted: 01 Aug 2012 02:06 AM PDT
"၁၉၈၂ခုနှစ် မတိုင်ခင်က ယာယီသက်သေခံကဒ်ပြား အများခေါ်တဲ့ white card ပေးထားတယ်။ အဲ့ဒါကဒ်သူတို့မှာရှိသေးရင် သူတို့မှာ နိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်လို့ရတဲ့ အခွင့်အရေးရှိတယ်။ သူကိုယ်တိုင်ကလဲ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်ဆိုရင်" ဟုလူဝန်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက ပြောသည်။
ဘင်္ဂလီများသည် မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူမည်ဆိုပါက လူဝန်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးထံသို့ လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပြီး ၁၉၈၂ခုနှစ်က ပြဌာန်းခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံသားဥပဒေပါ အချက်အလက်များဖြင့် ကိုက်ညီမူရှိပါ လက်ခံမည်သွားဖြစ်ကြောင်း ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရိုဟင်ဂျာ ဆိုပြီး လုံးဝမရှိကြောင်း ခိုင်ခိုင်မာမာပြောဆိုနိုင်ကြောင်း ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီက ပြောကြားခဲ့သည်။
"လျှောက်တဲ့အခါ သတ်မှတ်ချက်တွေတော့ ရှိတယ်။ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် အချက်အလက်တွေပြရမယ်။ မြန်မာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်ရမယ်။ စသဖြင့်သူ့ရဲ့ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်ကို တင်ပြရမယ်။ အဲ့ဒါတွေစုံရင် ဗဟိုအဖွဲ့ကိုတင်ရတယ်။" ဟု ဗဟိုအဖွဲ့တွင်လည်း ဥက္ကဌတာဝန်ယူထားသူဖြစ်သော ဦးခင်ရီက ဆက်လက်ပြောသည်။
၁၉၈၂ခုနှစ် ဥပဒေအရ မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်ခွင့်ပြုရာ လူဝန်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ၀န်ကြီး၊ နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ အခြား ၀န်ကြီးဌာနများမှ ၀န်ကြီးများ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြား သံအမတ်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ကင်တားနား လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မစ္စတာ ကင်တားနားသည်၂၀၁၂ခုနှစ် ဇူလိုင်လ(၃၁)ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင် နှင့် မောင်တောဒေသများသို့ သွားရောက်လေ့လာမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
Posted: 01 Aug 2012 02:02 AM PDT
Posted: 01 Aug 2012 12:01 AM PDT
Kerajaan Selangor bersedia membiayai kos guaman bagi membantu Rafizi Ramli menjalani proses mahkamah berikutan penahanannya berhubung pendedahan tiga akaun kewangan berkaitan skandal National Feedlot Corporation (NFC).
Johari Muhamad yang turut ditahan bersama Rafizi merupakan bekas kerani Public Bank yang dikatakan salah seorang pemberi maklumat mengenai pembelian hartanah mewah keluarga Shahrizat di KL Eco City, Bangsar. -selangorku
Wan Azizah kecam penahanan Rafizi
KUALA LUMPUR 1 Ogos: Presiden KEADILAN, Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail mengecam sekeras-kerasnya penahanan Rafizi Ramli atas pertuduhan mengikut Akta Bank dan Institusi Kewangan (Bafia) 1989.
Pada 27 Jun lalu, empat pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) mengambil keterangan Rafizi beberapa jam selepas beliau mendedahkan perkara itu. -KD
Posted: 31 Jul 2012 10:24 PM PDT
SHAH ALAM, Aug 1 ― PKR's Rafizi Ramli was arrested by police at his home here this morning over alleged violations of the Banking and Financial Institutions Act (BAFIA).
According to PKR, the party's strategy director, whom many view as Umno's "Enemy No. 1", was taken to the Hulu Kelang police station and will be presented later at the Sessions Court in Shah Alam to be charged.
"I have been arrested under BAFIA and now on the way to the police station. Will be charged in Shah Alam court," he tweeted earlier.
"Being taken to be charged at the Shah Alam Sessions Court now," readasubsequent tweet.
He had said the move to summon him for investigations showed "the authorities do not welcome whistleblowers". He then challenged Datuk Seri Najib Razak to deny that his administration was victimising informants and protecting those involved in corruption. Rafizi had asked why BNM did not investigate the family of former Cabinet minister Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil, who are directors of the National Feedlot Corporation (NFCorp) — the operators of the NFC — under the Anti-Money Laundering Act for alleged money laundering.
PKR had also accused NFCorp of "hunting down" alleged whistleblowers to "put the lid on" claims the company abused the RM250 million federal loan to finance property, luxury cars and expenses unrelated to cattle farming.
The party heldapress conference on May 14 withaformer Public Bank clerk, Johari Mohamad, who said he has been "pressured for months before resigning" on May2afteradomestic inquiry was held due toacomplaint by NFCorp chairman Datuk Seri Mohamad Salleh Ismail.
NFCorp also sued Public Bank for loss of reputation asaresult of an alleged breach of its security that resulted in the private banking information of the company, its chairman and related companies being "exposed to the world at large."
"၀န်ကြီး သတိုးမဟာဗန္ဓုလ သည် ကုလားတို့၏ ဗုံးအမြောက် တို့ကို လက်နက် မ မှတ် ရွှေထီးဖြန့် လျက် တပ်ထိပ် သို့လှည့် ကာ ပတ်ကာ မပြတ်သွားလာ ၏။ မြင်းနှင့် မြင်းစီး သူရဲ တို့ကို လှံရှေ အဲမောင်း စွဲကိုင်လျက် တပ်မှူး နေမျိုး ဂုဏ္ဏရတ် နှင့် မြင်း စီးရေ(၇၀) ကျော်တို့ မြင်းရေး ကစားစေသည်။"
အနောက် တိုင်း ဖြစ် အထည် ချောများကို အသုံးပြုလိုကြသော နေပြည်တော် သူ နေပြည်တော် သားတို့မှာ သူရောက်လာ လျှင် အထူး ပီတီ ဖြစ်ကြ၍ သူထက်ငါ လုယက် ၀ယ်ယူကြသဖြင့် လက်မလည်နိုင် လောက်အောင်ပင် ရောင်းချနေ လျက်ရှိ ပေ သည်။ သူကလည်း အ၀မြို့တော် သို့ ရောက်လိုက်လျှင် အထူးပီတိဖြစ် လျက် မြို့တော်သူမြို့တော်သား တို့အား တစ် အိမ် တက် တစ်အိမ်ဆင်းနှုတ်ဆက်ရင်း ၀င်ထွက်လှည့်လည် အထည်များ ကို ရောင်းချလေတော့ သည်။ မြို့တော် သူမြို့ တော် သား များ ကလည်း ကလေးကအစ သူအားမြင်လိုက်လျှင် "ဒိုကရင် လာပြီ။ ဒိုကရင် လာပြီ " ဟု ဆီးကြို နှုတ်ခွန်း ဆက်ကြ သည်။
တစ်နေ့ သောအခါ တော်ဘုရားလေးသည် ဒိုကရင်အား ရှေ့တော်သို့ ခေါ်၍ စံအိမ်တော် ၌ အဆောင်တော်ကိုင် အမှုတော် ထမ်း" အဖြစ် ဆောင်ရွက် ရန်မိန့်တော် မူလေ ၏။ ချစ်ခင်စွဲလမ်း ၍နေသော သူငယ်ချင်းတို့၏ စိတ်ဓါတ်သည် ခွဲခွာနေထိုင်ရ မည်ကို အလွန်ဝန်လေး တက်ပေသည်။ သို့နှင့် ဒိုကရင် ကလည်း တော်ဘုရားလေး ၏ အ မိန့်တော် ကိုနာခံ ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် ဗမာပြည်၌ ရိုးမြေကျနေ ထိုင်ရန် သန္နိဌာန်ပြုလိုက်လေတော့သည်။ ထိုအခါမှစ၍ ဒိုကရင် သည် တော်ဘုရားလေး ၏ စံ အိမ်တော် အဆောင်တော်ကိုင် အမှုတော် ထမ်းဖြစ်လာလေသည်။
အိမ်နိမ့်စံ တော်ဘုရားလေးသည် ၁၁၁၈ ခု နှစ် ၌ အမြင့်စံတော်မူရသောအခါ "အရှင်မြင့် ကျွန်တင့် " ဆိုသည့်စကားကဲ့သို့ အဆောင် တော်ကိုင် ဒိုကရင် အား စစ်ဗိုလ် ရာထူး ကို ချီးမြင့် ခန့်အပ်ပြန်သည်။ စစ်ဗိုလ်ကလေး ဒိုကရင် ကား စစ်သားများ အပေါ် ၌ စီမံ အုပ်ချုပ်ခြင်း ငယ်သား တို့အား ဖေါ်ရွေခြင်း၊ သဘောထားကြီးခြင်း၊ ငယ် သားတို့ ၏ ချစ်ခင်လေး စားခြင်း ခံ ရ ခြင်း တို့သည် ရပ်တည်၍မနေပဲ ရှေ့သို့ တိုးတက်မည့် ဒိုကရင်၏ အရည်အချင်း များပေတည်း။
ထိုအခါမှစ၍ စစ်ဗိုလ်ကြီး ဒိုကရင်အား "ခံတပ်ဗိုလ် ဒိုကရင်" ဟုခေါ်တွင်ကြလေသည်။ တဖန် ၁၁၈၃ ခုနှစ် တွင်အာသံဘုရင် စန္ဒြကန္တာရှိန်သည် အင်္ဂလိပ်များ ၏ သွေးထိုး မှုကြောင့် ပုန်ကုန်ခြား နား လေရာ ခံတပ်ဗိုလ် ဒိုကရင် အား မြင်းတပ်ကို ဦးစီးကွပ်ကဲ လျက်ချီတက်နှိမ် နင်းစေ ရာ အောင်မြင်ပြန်လေ သည်။ အာသံ ကပြန် လာ သော အခါ ယွန်း ပြည် သို့ သံအမတ် အဖြစ် စေလွှတ်ခြင်း ခံရခဲ့သည်။ ယွန်းပြည်၌ အမှုတော်ထမ်းရွက် ရာတွင် မင်း ၂ပါး၏ ချစ်ကြည် ရေး သည် အထူးအောင်ြ မင်ပေ သည်။ ယွန်းပြည်မှ နေပြည်တော် သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိ လာပြီးနောက် မကြာမီ အလ္လဟ် အရှင်မြတ် အမိန့်တော်ခံ ယူသွားလေ တော့သည်။
မြန်မာမွတ်စလင် သမိုင်း ဓါတ်ပုံများအား www.mmsy.org မှ တဆင့်ကူးယူဖေါ်ပြထားပါသည်။